Dagaal markale kabilowday Muqdisho
Dilal ka dhacay Kismaayo, Jilib iyo Bu'aale
Dilal kala duwan oo ka kala dhacay Kismaayo, Jilib iyo Bu'aale
Waxaa Magaalada Kismaayo lagu dilay labo nin,kuwaasooo lagu kala dilay bartamaha magaalada iyo dekadda ayadoo labadaa ninba ay dileen niman ay uyaaleen isbaarooyin,ninka lagu dilay dekadda magaalada Kismaayo ayaa ahaa nin ku shaqaysta baabuurta ka qaadda xamuulka dekadda,kaasoo ay is afdhaafeen nin ilaalo ka ahaa bar kantarool oo tiil iridda laga galo dekadda,halka ninka lagu dilay bartamaha magaalada ay dileen niman isbaarooyin dhigtay meesha loo yaqaano UMBALATOORIYO,waxaa in dhawaalaba kusoo badanayay magaalada Kismaayo maleeshiya aan cidina ka amar qaadan oo dhigtay meelo badan isbaarooyin dadka loo ga qaado baad amase waxa loo yaqaan leejo.
Sidoo kale waxaa magaalada Jilib lagu dilay nin ganacsade ah islamarkaana waxaa laga qaatay wixii hanti uu tiilay halkii lagu toogtay oo ahayd bakhaar uu ku ganacsan jiray ,waxaana la sheegayaa in loo dilay arrin salka ku haysa aano qabiil,maadaama uu ka dhashay beel ka mida beelaha ku dagaalamaya tuulada Xaramka,ayadoo beel ka mid kuwa ku dagaalmaya Xaramka ay ku eedeeyeen Isbahaysiga dooxada jubba inay la jiraan beesha Tunni oo hadda gacanta ku haysa Tuulada Xaramka.
Wararka iyana naga soo gaaraya magaalada Bu,aale ayaa sheegaya in lagu dilay duleedka magalada nin ka shaqaysta dhuxusha kana tirsan beesha jareer oo ah beelaan hubaysanayn aadna udegan magaalada Bu,aale waxaana ehelada marxuumka ay sheegeen inay dilkaas gaysteen maleeshiyada hadda gacanta ku haysa magaalada.
Waxaa indhawaalaba kusoo badanayay gobalada jubooyinka dilidda laiska dilo dadka shicibka ah oo aan badanaaba beelahoodu hubaysnayn.taasoo dadka ku abuurtay welwel joogta ah.
Dagaal la isku adeegsanayo hubka Noocyadiisa kala duwan ayaa saaka mar kale ka bilawday Deegaanka Siigaale oo ka tirsan Degmadda Hodan ee Magaaladda Muqdisho.
Dagaalkan oo bilawday saaka Saddexdii Subaxnimo ayaa waxaa uu salka ku hayaa dagaal horay halkaasi marar badan ugu dhex maray labo Maleeshiyo Beeleed oo kala taageersan labo shirkadood oo isku haysata Biyo galinta Deegaankaasi, Waxayna wararka laga helayo Aaga dagaalku sheegayaan in dagaalku uu ka bilawday kadib markii dhinac ka mida dhinacyadda ay dirirtu u dhaxayso uu weerar ku qaaday dhinaca kale oo markii horaba diyaar u ahaa dagaalka.
Ma cadda illaa iyo hadda khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi, laakiin goob jooge ku sugan Siigaale ayaa Qadka Taleefoonka ugu sheegay Shabakaddan inuu arkayay maydadka labo qof oo yaala meel u dhaxaysa labada ciidan ee dagaalamaya, Wuxuuna qofkaasi ku qiyaasay labada qof ee dhimatay inay ahaayeed dad Rayid ah oo ka baxsanayay Goobta Dagaalka.
Dadwayne farabadan ayaa la arkayay iyagoo ka soo qaxaya deegaanka uu dagaalku ka socdo, waxaaana deegaanadda u dhaw dhaw Siigaale soo buux dhaafiyay boqolaal qoys oo ka soo barakacay dagaalkaasi.
Deegaanka Siigaale oo marar badan la isku dayay in xal loo helo ayaa waxaa muuqanaysa in dadaaladii nabad raadinta ay ka xoog bateen Maleeshiyooyinka colaada hurinaya, Waxaana fashilmay wadahadal labada dhinac u dhaxeeyay oo ay ka soo shaqaysay Dawladda Ku Meel Gaarka ah ee Somalia, isla markaana ka socday Mawlaca Macallin Nuur ee isla deegaankaasi,